Shiinaha Shaohong marawaxadaha hawada iibiyaha ugu fiican, 13QT Air Fryer Oven, oo wata Buugga Recipes, Chip Free Chip Fryer, Nonstick Basket, oo loogu talagalay Cuntada Dufanka Yar, 1300W Qalabka hawada ee korantada ugu fiican iibiyaha, tilmaame LED, 12-in-1 Horudhaca kuleylka, Dubida, dubida & Qallajinta SH-777MH soosaarayaasha iyo alaableyda | Shao Hong
Shaohong marawaxadaha hawada iibiyaha ugu fiican, 13QT Air Fryer Oven, oo wata Buugga Cunnooyinka, Saliida Chip Bilaashka ah, Basketka Nonstick, ee Cunto Karinta Dufanka Yar, 1300W Qalabka hawada ee korantada ugu fiican iibiyaha, tilmaame LED, 12-in-1 Horudhaca kuleylka, dubista , Dubista & Fuuqbaarida SH-777MH
Qaab No.: SH-777MH
- Miiraha hawadan ayaa run ka dhigaya 'cuntooyinka shiilan ee caafimaadka qaba'. Heerkulka wuxuu u dhexeeyaa 149-482 ° F wuxuu kuu ogolaanayaa inaad wax ku karsato heerkulka aad rabto, inaad ku guuleysato caafimaad qab, cufan, shiilan adigoo isticmaalaya uguyaraan 98% saliid kayar kuwa wax lagu shiilo. Macasalaam shiil dhaqameed.
- Mashiinka wax lagu shiilo ee hawada ku jira wuxuu ku dhex jiraa digsi quraaradeed oo kala bixi kara. Isticmaalka ka dib, si toos ah ayaad ula soo bixi kartaa, ka dibna si fudud ayaad u nadiifin kartaa, sidoo kale si fudud ayaad u tirtiri kartaa dusha sare ee mashiinka hawada.
- Qaboojiyaha hawadu wuxuu ku yimaadaa afar qaab oo kala duwan oo wax lagu karsado, sauté / shiil / dubista / dubista, si loo wada qanciyo dhammaan baahiyahaaga cuntada oo qof walba looga dhigo madaxa guriga.
Si fudud loo isticmaalo saacadaha farsamada iyo dilal dejinta heerkulka.
Daboolka dhalada ah ee muraayada cad iyo kuleylka u adkaysta madadaalada cuntada.
Heerkulka karinta wuxuu u dhexeeyaa 65ºC ilaa 250ºC (149ºF - 482ºF).
Kordhi awoodda adoo kudaraya giraan fidiyaha (ikhtiyaar).
1 × 20ft Weelka: 455pcs
1 × 40ft Weelka: 945pcs
1 × 40HQ Weelka: 1080pcs
Hore: Shaohong power xl air fryer, Family Rotisserie Oven, 1300W Electric Air Fryer Toaster Oven, tilmaame LED, 12-in-1 Horudhaca kuleylka, dubista, dubida & Fuuqbaarida, Qalabka & Buuga Cuntada, SH-767MH
Xiga: Shaohong Air Fryer, 13QT Air Fryer Foven, Qoyska Rotisserie Oven, 1300W Electric Air Fryer Toaster Oven, Tilmaame LED, 12-in-1 Horudhac ah oo kuleylka, dubista, dubista & Qallajinta, Qalabka & Buugga SH-787MH
Kitchenaid Dual Convection Countertop Foornada Hawada ...
Shaohong marawaxadaha hawada max L ee Karsada, Qalalaasaha, Ro ...
Convection foornada hawo qaboojiyaha 7L-10L haanta hawada, Per ...
Shaohong marawaxadaha hawada yar oo leh 9 Qalabka, Ro ...